चीनको म्याजिक नम्बर, के तपाईंलाई थाहा छ यो के हो? | यात्रा समाचार
मारिया जोस रोल्डन | | चीन, एशिया यात्रा
सबैजनासँग मनपर्ने नम्बर, वा नम्बर हुन्छ जुन व्यक्तिहरूको जीवनमा केही महत्त्वपूर्ण सम्झन्छ। तर केही संस्कृतिहरूका लागि संख्याहरू केवल आंकडा भन्दा धेरै हुन्छन्, तिनीहरू भाग्यको प्रतीक हुन सक्छन्।, प्रतीकहरू जुन राम्रो भाग्यहरू वा यसको ठीक उल्टो देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, चीनमा यसको जादुई संख्या is हो। तर नम्बर number मा के छ जुन अरू कुनै नम्बरसँग छैन? हुनसक्छ यो आकार हो, किनकि यदि तपाईंले नम्बर number लाई तेर्सो रूपमा राख्नुभयो भने, यो अनन्तताको प्रतीक बन्छ। धेरैको लागि र चिनियाँहरूका लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रतीक।
तर यदि तपाइँ किन जान्न चाहानुहुन्छ कि किन चीनको जादू नम्बर छ र किन त्यो त्यो संख्या हो र अर्को होइन, त्यसो भए पढ्न जारी राख्नुहोस् किनकि तपाइँले भन्नु पर्ने सबै कुरामा तपाईले रूचि राख्नु हुनेछ। हुनसक्छ पछि यसको कारण तपाईले यस नम्बरलाई आफुलाई पनि जादूको रुपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ।
1 चीनमा जादू नम्बर
2 8 अगस्ट 2008
2.1 ओलम्पिक खेलहरूमा
2.2 गर्भवती महिलाहरू जसले आफ्ना बच्चा पाउन चाहन्थे
2.3 धेरै जोडीहरूले विवाह गरे
3 Of को जादू
49नम्बर पनि महत्त्वपूर्ण छ
चीनमा जादू नम्बर
चीन पछाडि धेरै संस्कृति र इतिहास सहितको देश हो। तपाईंले भर्खर यी सबै स्मारकहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ जुन कसरी यसको पारम्परिक धर्म छ जुन आज सम्म जारी छ।
तर जसरी तिनीहरूको ठूलो इतिहास छ, यो पनि एक संस्कृति हो जसले अन्धविश्वासमा धेरै विश्वास गर्दछ। चिनियाँ संस्कृतिका मानिसहरु लाई अन्धविश्वासको ठूलो शक्ति छ र बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। के यदि तिनीहरू अवस्थित छन् भने, यो केहिको लागि हो र त्यसैले उनीहरूको आदर गरिनु पर्दछ र व्यक्तिहरूको जीवनमा ध्यानमा राख्नु पर्दछ।
8 अगस्ट 2008
8 अगस्त 2008, २०० 08.08.08, अर्थात् ० XNUMX.०XNUMX.०XNUMX मा, ओलम्पिकको अतिरिक्त, चीनका सबै बासिन्दाहरू बीच एउटा फरक भावना जाग्यो।, तिनीहरूले एक निश्चित रोष महसुस गरे जुन उनीहरूको लागि अवर्णनीय थियो।
यस दिन चीनमा धेरै चीजहरू भयो जुन संख्या आठसँग सम्बन्धित छ र तिनीहरूको लागि यो अपत्यारणीय दिनको साथ छ। चिनियाँले 08.08.08/XNUMX/XNUMX लाई आफ्नो जीवनको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा सम्झन चाहन्थे, र त्यसैले केही असामान्य घटनाहरू भए।
8 नम्बरलाई सँधै चिनियाँ संस्कृतिले एक संख्याको रूपमा लिन्छ जुन भाग्य, सौभाग्यको प्रतीक हो। यो त्यस्तो हो किनभने मन्डारिन भाषामा number नम्बर "बा" जस्तो देखिन्छ र यसलाई कसरी "समृद्धि" भनेर उच्चारण गरिएको जस्तो मिल्दो छ। यो यस कारणले गर्दा थियो ओलम्पिक खेलहरू अगस्त,, २०० 8 मा pm,, मिनेट र seconds सेकेन्डमा उद्घाटन गरियो। सबै कुरा उत्तम हुनुपर्‍यो!
गर्भवती महिलाहरू जसले आफ्ना बच्चा पाउन चाहन्थे
यद्यपि यो संख्या regarding को सम्बन्धमा चिनियाँहरूको मात्र एक्सेन्ट्रसिटी होइन। अस्पतालहरूमा गर्भवती महिलाले आफ्ना डाक्टरलाई उनीहरूलाई जन्म दिन वा सिजेरियन खण्डमा उही दिन आफ्ना बच्चाहरूको जन्माउन अनुरोध गरे। राम्रो भाग्य को। तर जस्तो स्पष्ट छ, गर्भवती महिलाहरूको आफ्ना बच्चाहरूको लागि त्यस दिन जन्मको लागि धेरै इच्छाको कारण, डाक्टरहरूले उनीहरूको अनुरोधलाई मानेनन् किनकि यो कार्यान्वयन गर्न केहि वैधानिक छैन।
धेरै जोडीहरूले विवाह गरे
तर यदि यो पर्याप्त नभएमा मैले यस बिन्दुमा भनेको छु, यो याद गर्नुपर्दछ कि धेरै पेकिन्जी जोडीहरू, त्यस दिन १ 16.400०० भन्दा बढी विवाह गरेका थिए। उद्देश्य त्यो थियो कि ० 08.08.08.०XNUMX.०XNUMX मिति उनीहरूको विवाह प्रमाणपत्रमा देखा पर्न सक्छ, जुन कुरा जोडीहरूले सोचे कि उनीहरूको विवाहित जीवनमा धेरै भाग्य ल्याउनेछ।
यसैले विवाह गर्न चाहने सबै जोडीहरूले यस दिन बेइजि ofको मुख्य जिल्लाहरू (चाओयाang, हेडियन, डो Dongचेng, सिचेng, चोंगवेन, जुआनवु, फेgगताई र शिजिंगशान) को विवाह दर्ता जिल्लाहरू विवाह गर्न सक्दछन्। तिनीहरूले आफ्नो कार्यालयहरू १२ घण्टामा खोले जुन बिहान छ बजे भन्दा दिउँसो साँझ छ बजेसम्म फैलिएको थियो। शारीरिक र अनलाइन दुबै अनुरोधहरूमा उपस्थित हुन त्यहाँ अतिरिक्त स्टाफहरू पनि थिए। त्यसकारण विवाह गर्न चाहने जोडीहरूले त्यस दिन छिटो र कुनै बाधा बिना नै गर्न सक्दछन्।
Of को जादू
तपाईं भन्न सक्नुहुनेछ कि 8 चीनियाँका लागि जादू नम्बर हो, तर यो धेरै मानिसहरूका लागि पनि हो जुन सोच्दछन् कि 8 अनन्तको प्रतीक हो र यो संख्याको अर्थ यसको मतलब हुन सक्ने जुनसुकै कुरा आउँछ। 8 धेरैको लागि शुभकामनाको संख्या हो र चिनियाँहरूको लागि कुनै श doubt्का बिना जादुई।
चिनियाँ ज्योतिषमा signs चिन्हहरू छन्, तिनीहरूको सरकारमा imp शाही मन्त्रीहरू छन्, उनीहरूसँग card वटा मुख्य पोइन्टहरू छन् र त्यहाँ 8 वटा ब्रह्माण्डका पहाडहरू उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। धेरै व्यक्ति आफ्नो जीवनमा 8 नम्बर प्राप्त गर्न कोशिस गर्छन् जसमा उनीहरू आफ्नो जीवनमा ठूलो भाग्य पाउँदछन्।
9 नम्बर पनि महत्त्वपूर्ण छ
पुरातन चिनियाँहरूले स numbers्ख्यालाई ब्रह्माण्डको रहस्यमय भाग मान्थे। जसरी एक संख्याdजस्तै अनौठो हो, यो "यang्ग" को वर्गमा सम्बन्धित छ शक्ति र पुरुषत्व प्रतिनिधित्व गर्दै। पुरातन चीनमा नम्बर १ ले सुरूवात संख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि संख्या inf ले अनन्तता र कट्टरपन्थीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्यसैले the नम्बरलाई चीनको जीवनका थुप्रै पक्षमा पनि देख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, शाही दरबारमा वा मठहरूमा, ढोका, विन्डोज, सीढी वा सामानहरू जुन अस्तित्वमा हुन्थ्यो त्यो सँधै नौको गुणा हुन्छ वा contained समावेश भएको संख्या।
चिनियाँहरूको लागि, समान संख्याहरू "यिंग" को कोटीको हुन्छन् र अनौंठोहरू "यांang" को हुन्। चिनियाँहरु जीवन diametrically हेर्न को लागी गर्छन। त्यसोभए जब जीवनमा परिवर्तन आउँछ भने यो प्राय: यसको विपरित परिवर्तनको परिणाम हो। चिनियाँ संस्कृतिमा अ symbol्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने like like जस्तो प्रतीक पनि एक चेतावनी हो, एउटा महत्त्वपूर्ण मोड जुन सिक्न, बढ्न, पुनर्जन्म, परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि ध्यानमा राख्नु पर्छ।
परम्परागत चिनियाँ संस्कृतिमा, नम्बर नौको पनि ठूलो अर्थ छ। अर्को उदाहरण के हो भने नौौं महिनाको नवौं दिन चीनमा धेरै महत्त्वपूर्ण चाड हो। यो त्यस्तै चाड हो जुन डबल याang महोत्सव हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » चीन » चीनको जादुई संख्या
अल्बानियाको महत्त्वपूर्ण शहरहरू
स्पेनमा १० महान ब्लू फ्ल्याग बीचहरू